Shiinaha Yaskawa Motoman Gp8 qabashada Robot warshad iyo soosaarayaasha | Jiesheng
YASKAWA MOTOMAN-GP8waa qayb ka mid ah taxanaha aaladaha GP-ga. Culeyskeeda ugu badan waa 8Kg, iyo dhaqdhaqaaqiisa kala duwan waa 727mm. Culeyska weyn waxaa lagu qaadi karaa meelo kala duwan, taas oo ah waqtiga ugu sarreeya ee loo oggol yahay curcurka isku heer ah. 6-dhidibka tooska ah ee isku-dhafan ee isku-dhafan wuxuu qaataa qaab-suunka u eg qaab wareegsan, gacan yar oo dhuuban oo qaab qaabeed ah si loo yareeyo aagga faragelinta waxaana lagu keydin karaa qalab kala duwan goobta wax soo saarka isticmaalaha.
YASKAWA MOTOMAN-GP8 waa qayb ka mid ah taxanaha aaladaha GP-ga. Culeyskeeda ugu badan waa 8Kg, iyo dhaqdhaqaaqiisa kala duwan waa 727mm. Culeyska weyn waxaa lagu qaadi karaa meelo badan, taas oo ah awoodda ugu sareysa ee ay oggoshahay curcurka isku heer ah. 6-dhidibka tooska ah ee isku-dhafan ee isku-dhafan wuxuu qaataa qaab-suunka u eg qaab wareegsan, gacan yar oo dhuuban oo qaab qaabeed ah si loo yareeyo aagga faragelinta waxaana lagu keydin karaa qalab kala duwan goobta wax soo saarka isticmaalaha.
GP8 maaraynta aaladda waxay ku habboon tahay qabashada, gundhigga, isu geynta, shiida iyo ka shaqeynta qaybaha ballaaran. Waxay qaadataa qaab-dhismeedka caadiga ah ee IP67 waxayna leedahay waxqabad fara-gelin ah oo fara-gelin ah. Tallaabooyinka soo gelitaanka arrimaha shisheeye waxaa lagu xoojiyay qaybta wadista gacanta, oo ka jawaabi karta bogagga wax soo saarka isticmaalaha kala duwan.
Xidhiidhka isku xidhka ee ka dhexeeya shaqadan badan maaraynta aaladda iyo taageerida xakamee golaha wasiirada YRC1000 wuxuu isu beddelay labo illaa mid, taasoo soo gaabinaysa waqtiga bilowga qalabka, waxayna ka dhigeysaa fiilooyinka mid kooban, waxayna aad u yaraynaysaa waqtiga beddelidda fiilada caadiga ah. Dusha sare waxaa loogu talagalay dusha sare oo aan sahlaneyn in loo hoggaansamo boodhka, kaas oo ku habboon in la nadiifiyo, oo fudud in la ilaaliyo, oo leh waxqabad deegaan oo aad u sarreeya.
32kg 1.0kva 455 ° / Sec 385 ° / Seken
520 ° / Seken 550 ° / Seken 550 ° / Seken 1000 ° / Sek
YASKAWA MOTOMAN-GP8 waxaa lagu rakibi karaa dhulka, hoos-u-jeed, darbi-dhajinta, iyo u janjeera. Marka la rakibo darbiga ama u janjeera, dhaqdhaqaaqa xagasha S waa la xaddidayaa. Naqshadeynta gacan-khafiifka ah waxay u oggolaaneysaa rakibid fudud, dhakhso leh oo wax ku ool ah meesha ugu yar, oo leh faragelinta ugu yar ee qalabka kale, iyo qaabdhismeedkiisa jilicsan iyo is haysta ayaa leh kantaroolka ugu fiican ee dardargelinta iyo hoos u dhaca, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon isku-socodka xawaaraha sare iyo geeddi-socodka wax-qabadka. dooro.
Hore: Yaskawa Motoman Gp7 Handling Robot
Xiga: Yaskawa Qabashada Robot Motoman-Gp12
6 Axis Qabashada Robot, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka, Aaladda otomaatiga ah ee Robot, Qabashada Gacanta Robot, Robotka Gacanta otomaatiga ah, Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta,